Ọ bụ ezie na okwu teknụzụ sitere n'okwu Grik téchnē, nke pụtara “ọrụ aka,” ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na anyị na-ekwu banyere ya ugbu a ozi teknụzụ. Ndị na-agụ akwụkwọ nke The Martech Zone na-abanye n'ọtụtụ obodo nke mpaghara a. Anyị na-amagharị gburugburu acronyms dị ka URL, SEO, VoIP na PPC. Anyị na-eme ka atụnyere sara mbara n'etiti ngwaahịa, ọrụ na ọrụ dị iche iche dị ka enweghị njikọ. Worldwa nke teknụzụ jupụtara na jargon nke ukwuu nke na ọ gaghị ekwe omume ịghọta ihe ndị mmadụ na-ekwu na nzukọ. Asị na ị banyela “teknụzụ” nwere ike imenye ụfọdụ ụjọ.
Enwere ụwa dị iche na teknụzụ na teknụzụ. Teknụzụ bụ ngwa bara uru nke echiche sayensị iji mepụta nsonaazụ bara uru ma ọ bụ na-atọ ụtọ. Teknụzụ bụ ọtụtụ nkọwa na-eme ka teknụzụ na-arụ ọrụ. Iji dokwuo anya: Ọ dị mkpa na onye maara otu esi achọpụta nsogbu injin dị n'ụgbọ ala gị, mana iji nwee ike ịnụ ụtọ teknụzụ ụgbọ ala ịkwesighi ịbụ onye ọrụ ụgbọ.
Ọ bụghị ihe mgbagwoju anya, anyị anaghị azụ ihe ozugbo. N'ezie? Kedu ihe m ga-eji ngwaọrụ na enweghị keyboard? Anyị na-ajụ onwe anyị, gịnị kpatara m ji chọọ igwe na-eji asụsụ mmadụ arụ iji zipu ozi ederede n’aha m?
Mgbe ụfọdụ teknụzụ na-adị ka ihe dị mgbagwoju anya ma na-agafe anyị. Nke a bụ nsogbu kachasị ọnọdụ niile, n'ihi na ọ siri ike inyere mmadụ aka ịmata na ọ bụrụ naanị na ha ghọtara ntakịrị nkọwa nkọwapụta (dịka ọdịiche dị n'etiti igbe ọchụchọ na adreesị adreesị), ha ga-aka mma.